I-Soundtrap: Dala i-Podcast Yakho Eqhutshwa Izivakashi Emafini | Martech Zone
Uma ngabe wake wafuna ukudala i-podcast futhi uletha izivakashi, uyazi ukuthi kungaba nzima kanjani. Njengamanje ngisebenzisa i-Zoom ukwenza lokhu ngoba banikela nge- inketho yamathrekhi amaningi ngenkathi kuqoshwa… ngiqinisekisa ukuthi ngikwazi ukuhlela ithrekhi yomuntu ngamunye ngokuzimela. Kusadinga ukuthi ngingenise amathrekhi alalelwayo ngiwaxube ku-Garageband, noma kunjalo.
Namuhla bengikhuluma nozakwethu UPaul Chaney futhi wabelane nami ngethuluzi elisha, i-Soundtrap. I-Soundtrap yipulatifomu eku-inthanethi yokuhlela, ukuxuba, nokusebenzisana ngomsindo - noma ngabe umculo, ukuxoxa izindaba, noma olunye uhlobo lokuqoshwa komsindo.
I-Soundtrap yabathengisi bezindaba
I-Soundtrap yisixazululo sefu lapho ungaqopha khona i-podcast yakho, umeme izivakashi kalula, uhlele ama-podcast akho, futhi uwashicilele wonke ngaphandle kokulanda nokusebenza ngaphandle.
Izici ze-Soundtrap Podcast Studio
Ipulatifomu inayo ipulatifomu yedeskithophu enikezela ezinye zalezi zici ezingeziwe.
Hlela i-podcast yakho ngokuloba - Ipulatifomu ye-Soundtrap yedeskithophu inomhleli ojwayelekile kepha bangeze ukuloba okuzenzakalelayo - isici esihlakaniphile sokwenza kube lula ukuhlela i-podcast yakho njengoba ungaba umbhalo wombhalo.
Mema futhi urekhode izivakashi ze-podcast - Ngoba ukusebenzisana bekuyisihluthulelo lapho kwaklanywa i-Soundtrap, ungamema kalula izivakashi zakho esimisweni sokurekhoda ngokumane uzithumele isixhumanisi. Uma sebengenile, ungabasiza ngokusetha umsindo wabo futhi ukurekhoda kungaqala! Abadingi ukubhalisela ukumenywa.
Faka umsindo nokubhaliwe ku-Spotify - Leli yilo kuphela ithuluzi elikuvumela ukuthi ulayishe womabili ama-podcast nemibhalo ngqo ku-Spotify, kukhulisa ukutholakala kwe-podcast yakho.
Engeza umculo nemisindo - Dala i-jingle yakho bese uqedela umkhiqizo wakho ngemisindo evela ku- I-Foundound.org izinsizakusebenza zomsindo.
Qala isilingo sakho samahhala senyanga engu-1 se-Soundtrap
Tags: ukusebenzisana komsindoukuhlela umsindoumhleli womsindohlela umsindoisivakashi podcastpodcastumhleli we-podcasti-podcast jingleumbhalo we-podcastsaasimiphumela yemisindoiculo lomsindophakamisaababalisi bezindaba